Global Voices teny Malagasy » Fihetseham-Bahoaka Manohitra Ny Fikasana Hampiakatra Ny Hetra Ao Ekoatora · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Jolay 2015 2:49 GMT 1	 · Mpanoratra Daniela Gallardo Nandika (en) i Nicholas Cumberbatch, imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, Ekoatora, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana
Ekatoriana mpanohitra manao fihetsiketsehana manohitra ny tolodalàna momba ny hetra amin'ny fandovàna ao Guayaquil. Sary : César Muñoz/Andes avy amin'ny kaonty Flickr an'ny Agencia Andes, nampiasàna ny fanomezan-dàlana Creative Commons.
Tamin'ity herinandro ity, taorian'ireo hetsi-panoherana tany amin'ny tanàna maro sy ny fitsidihan'ny Papa Francis, sendra ny taolana ny fikasana iray vaovaon'ny Filoha Ekoatoriana Rafael Correa hametraka lalàna vaovao, izay nikatsaka ny hilaminan'ny rivotra politika tao amin'ny firenena. Mety hametraka hetra mitombo an-dàlana  amin'ny raharaha fandovàna mitentina hatramin'ny 35.400 dolara sy hetra 75 isanjato  amin'ny tombony azo avy amin'ny renivola sy ny fananantany ilay volavolan-dalàna napetraky ny Filoha Correa.
Na eo aza ny olana amin'ny lalàna, nivoady ny tsy hiala amin'ny heviny ny Filoha Correa. Ny 15 Jona, taorian'ny hetsi-panoherana iray naharitra herinandro, nampanantena ny Filoha fa tsy hihemotra na “indray mandingana” aza amin'ireo hetra vaovao izay lazainy fa “olom-bitsy mpanankarena” ihany no hiharany :
Raha misy porofo fa mahakitika ny saranga mahantra indrindra sy ny antonontonony ilay Lalàna momba ny Fandovàna sy ny Tombony amin'ny Renivola, izaho mihitsy no hangatana ny Antenimiera [-mpirenena] hampirina ireo lalàna ireo. […] Te-hanaisoatra ny filoha va ianareo? Mampanaova fitsapankevi-bahoaka dia mbola hivoaka hisongadina ery an-tampony ery indray aho.
Ora roa taorian'ilay fanambaràna anefa dia niova hevitra  i Correa. Iny alina iny, tao anatin'ny “Hafany ho an'ny Firenena” dia nilaza tamin'ny firenena i Correa fa hosintoniny vonjimaika aloha ilay tolodalàna momba ny hetra, mba hiantohana ny hisian'ny tontolo “mandry fahalemana sy ravoravo” mandritry ny fitsidihan'ny Papa Francis.
Kanefa, tsy nisinda  ireo fihetsiketsehana sy fanoherana ara-politika an-ilay fampiakàrana hetra. Nisy fihetsiketsehana goavana natao nanerana ny firenena ny 18 sy 25 Jona, ary notakian'ny fiaraha-mientana politika Democracia Sí  ny hanaovana fitsapankevitra momba ny fitantanan'i Correa , loza mitatao mety hahavery asa ny filoha.
Maro amin'ireo mpifidy no manohy miahiahy momba ny ho fiantraikan'ireo tolodalàna fampiakarana hetra any amin'ny sarangam-piarahamonina any, manontany momba ny fitsinjarana ny harena sy ny dona mafy mety hanjo ireo tompom-panànana miorina ao Ekoatora.
Tany ampiandohan'ny Jona, tafidina teny an'arabe ny olana sosialy izay nanomboka tamin'ny tenifototra tety anaty aterineto (toy ny #FueraCorreaFuera , na “MIALACorrea,” sy #SigueCorreaSigue , na “MIJANONACorrea”), nanosika ireo hetsi-bahoaka, hatramin'ny fihetsiketsehana ho fanohanana ny Filoha Correa sy ny antoko eo amin'ny fitondrana:
Tsy mila revolisiona iray sy manova ny zavatra rehetra ianao, amin'ny anaran'ny fivoarana.; ny miala mandao am-pilaminana ny vahoaka fotsiny ihany no ilainao.
Mankany amin'ny famoronana asa sy ny fampitomboana vokatra eto Ekoatora
Ny hany sisa azon'ny governemanta atao dia ny manery ny mpiasam-bahoaka hivoaka sy hanao diabe hiatrika ireo mpanohitra.
Oposición golpista [Mpanohitra mankasitraka ny fanonganana], henoy : Miasa isika. Tsy mandova na inona na inona.
Na iray isan'ny henjana be aza ny lalàna mankany amin'ny fiovàna, miaraka aminao aho, ry filohako
Ry tsy ampy kely, aleo lazaiko anareo, miaro ity dingana Revolisionera ity ny CUENCA. Fotoana izao hirosoana!!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/07/09/71730/
 hetra mitombo an-dàlana: https://news.vice.com/article/ecuadors-president-wants-to-tax-inheritances-by-as-much-as-77-percent-sparking-protests
 hetra 75 isanjato: http://www.ecuadortimes.net/2015/06/10/private-or-public-works-will-generate-capital-gain-tax/
 niova hevitra: http://www.cuencahighlife.com/correa-challenges-opposition-to-show-that-his-proposed-taxes-will-affect-the-poor-and-middle-class-says-he-will-withdrawn-them-if-they-do/
 tsy nisinda: http://www.telesurtv.net/english/news/Unrest-Continues-Despite-Call-for-Peaceful-Debate-in-Ecuador-20150617-0037.html
 fitantanan'i Correa: http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/163629-primer-pedido-para-revocar-mandato/